सरकारद्वारा रेबिज इम्युनोग्लोबुलिनमा नयाँ पद्धतिको सुरुवात – Swasthya Samachar
आइतबारदेखि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटबलमा लागाईने
November 18, 2021 Editor स्वास्थ्यसमाचार
स्वास्थ्यसमाचार /सरकारले रेबिजविरूद्ध लगाइने इम्युनोग्लोबुलिन एन्टीबडी सातै प्रदेशमा विस्तार गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै इम्युनोग्लोबुलिन सेवा लुम्बिनी प्रदेशको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटबलमा पाईने बताए ।
स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले मंसिर ५ गतेबाट यो सेवा सबै प्रदेशमा विस्तार हुने बताए। ‘मंसिरको ५ गतेबाट सबै प्रदेशमा रेबिज इम्युनो ग्लोबुनिको सेवाप्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ मन्त्री खतिवडाले भने, ‘ हाललाई ठूला ९ सरकारी अस्पतालबाट उक्त सेवा लिन पाइन्छ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले नेपालमा कुकुरको टोकाइबाट ३५ जना भन्दाबढीको वार्षिक मृत्यु हुने गरेको बताए। सरकारले टेकु अस्पतालबाट मात्रै यो सेवा निःशुल्क प्रदान गर्ने जनाएको छ।डा. पौडेलका अनुसार रेबिजबाट हुने मृत्यु जोगाउनका लागि इम्युनोग्लोबुलिन एण्टीबडी दिइन्छ । यसलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले अति आवश्यक औषधिको सूचीमा राखेको छ।
एक वा एक भन्दा बढि घाउ हुने गरी टोकेमा, ठूलो घाउ हुनेगरी टोकेमा, म्युकस मेम्ब्रेन वा छाला फुटेको ठाउँमा रेबिज शंस्कापद जनावरको ¥याल परेमा वा अनुहार र हातमा टोकेमा बढी जोखिम मानिन्छ।